China N, N-dimethylbenzylamine vagadziri uye vanotengesa | Kuzvipira
Zita: N, N, N ', N'-Tetramethylethylenediamine
Mashoko anoreva zvakafanana: TMEDA / TEMED, BIS (DIMETHYLAMINO) ETHANE, 1,2-
Molecular Kurema: 116.21
CAS Kwete.: 110-18-9
UN Kwete.: 2372
TMEDA inokonzeresa isinga shaye-kune-mashanga emvura tertiary amine. Izvo zvinhu zvine hunhu hweamine kunhuhwirira. Inonyungudika nyore nyore mumvura, ethyl doro, uye imwe organic solvent.
Iyo inoshandiswa seyakaganhurirwa mu organic synthesis. Iyo zvakare inoshandiswa seyakachinjika chinokonzeresa ye polyurethane mafomu akaomarara. Iyo yemahara radical stabilizer inoshandiswa seyakagadzirisa neAPS kusimudzira polymerization yeacrylamide gels
Pasuru uye Kuchengetedza: 160kg / dhiramu. Yakanyatso vharwa kudzivirira kubva pakubuda uye nekubata mvura. Inochengeterwa munzvimbo inotonhorera, yemhepo uye yakaoma nzvimbo, kure nemoto uye sosi inopisa.
Ikozvino kugona kwedu kwekugadzira kuchakwanisa kusvika 2000MT pagore, tinogona kuronga iko kutumira kwauri munguva.
Isu tine yakasimba yemhando yekudzora sisitimu, ese edu ehunyanzvi ane hunyanzvi, iwo ari akaomarara pane mhando kutonga
Pashure: 1,2-diaminobenzene CAS: 95-54-5